A Dirie | Maqaallo, Madadaalo. Maansooyin, Maahmaaho ama murti oo dhan. | Baal 2
Maarso 14, 2013 //
Tani inay horey u jirtay waa layga aqoon badan yahay balse baryahan iyo intaan arkayayba, Somali waxbaa laga sheegayay. Iyaguna haw badnaadeen cid wax ka sheegaysa Somaliye. Wax alaale wixii xun waxaan sabab uga dhignay Somali (jamac). Labo qof oo is fahmi waayay ayaad arkaysaa waxaadna dhahaysaa “Somali”, mid baa xilligii lagu balansanaaa saacad ka daba maraya, waxaan dhahaynaa “Somali” ama waa wakhtigii Somalida, iwm.
Haddaba waxaa inala gudboon, gaar ahaan dhalinyarada, inaan magaca ka ilaashanno in xumaha walaal looga dhigo. Dhibkaynu soo maray ee hadda inaga sii baxayaa waa mid aynu aduunka kala simannahay. Wakhtiguna marna wuu kula jiraa marna wuu kaa jiraa marka markuu innaga inaga yara janjeedhsaday waa inaynaan aqbalin in wax yaalaha xun xun, ee aynu adduunkaba kala simannahay, ay afduubaan magaceenna. Haddaynaan diidin astaamaha xun xun ee laynagu naanaysayo, buugta ayay inoo galayaan.
Somali waa kii YamYam ka sheekeeyey, maaha ka ciyaalka qarxinnaya iyo ka hantidda dadka boobaya toonna.
Galinba waa si maalmuhu,
Marbaad gacan saraynoo
Cadowgaa hog galayaa.
Gobanimo la helaybaad
Maanso: Maxaad II Gayn Cidlada
Febraayo 13, 2013 //
Ineel ruux haduu wax galo,
Amaba uu gudo wanaag,
Samaanno u gaara iyo,
Ineel guul buu helaa.
Middii aan ku gashadiyo
Addon gudan wajibkaan
U dhisnay gurigeena wacan
Maxaad iiga guuraysaa?
Waan kuu Oomanahay
Janaayo 31, 2013 //
Waan kuu oomanahoo
Adigaan ku raabaa.
Janaayo 24, 2013 //
Maansadan waxaan gaar’ahaan ku waaninayaa wiil ila dhashay oo raba inuu iskuulka joojiyo, guud ahaanna inta fursadda u haysa een aan ka faa’iidaysan wakhtigooda iyo waxbarasha hadday nasiib u heleen.
Dhamaan idilkood dadkoo dhan
Waxaa dhinac looga jeestay
tacliinta inaan la dhaamin. Dheeho inta ka hartay qormadaan →
Janaayo 16, 2013 //
Adeero Adeero aduunka
Dhibkiisa aloosan adeero
Allow uu ku seego adeero. Dheeho inta ka hartay qormadaan →
Tilmaamayaal Adan, Dirie, hees caruureed, Maanso, Soomaali